अभिनेत्री जया बच्चन र कंगनाबिच वाकयुद्ध
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा समाजवादी पार्टीकी सांसद जया बच्चन र अभिनेत्री कङ्गना रनावत बिच वाक युद्ध सुरु भएको छ ।
बच्चनले मङ्गलवार राज्यसभामा ड्रग्सका नाममा बलिउडलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र भइरहेको र ड्रग्स छानबिनका नाममा विश्वमै नाम कमाएको बलिउड उद्योगलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र चलिरहेको बताएकी थिइन् ।
उनले कसैको पनि नाम नलिई ‘केही मानिसहरूका कारण सिङ्गो बलिउड नगरीको छविलाई दुषित गर्न मिल्दैन । मलाई लाज लाग्छ कि, लोकसभामै हाम्रा एक सदस्य जो चलचित्र उद्योगसँग जोडिएका छन्, उनले यसको विरुद्धमा बोलेका छन् । यो लाजको विषय हो । जुन थालमा खायो सोही थालमा थुक्न मिल्दैन ।’ भनेकी थिइन् ।
जयाले यस किसिमको अभिव्यक्ति दिएपछि अभिनेत्री कङ्गना रनावतले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । उनले ट्विट गर्दै प्रश्न गरेकी छिन् ‘ मेरो ठाउँमा तपाईँकी छोरी श्वेतामाथि हातपात हुन्थ्यो, ड्रग्स दिइएको हुन्थ्यो र शोषण गरिएको हुन्थ्यो भने के तपाईँ यही भन्नुहुन्थ्यो ? अभिषेकले ह्यारेसमेन्टका कारण आत्महत्या गरेको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो ? थोरै त सहानुभूति देखाउनुहोस्।’
जयाको समर्थनमा हेमा मालिनी
बीजेपी सांसद तथा बलिउड नायिका हेमा मालिनीले जया बच्चनले दिएको अभिव्यक्तिको समर्थन गरेकी छिन् ।
हेमाले भनेकी छिन्–‘बलिउडलाई लिएर जे जस्ता कुराहरु भैरहेका छन्, यो सबै आश्चर्यलाग्दो छ । बलिउड सुन्दर ठाउँ हो । धेरै मानिसले यो स्थानमा आएर नाम, दाम र इज्जत कमाएका छन् । म यहाँ लामो समयदेखि छु र मलाई यही क्षेत्रबाट नाम र इज्जत मिलेको छ । धेरै महान् मानिसहरुले मिलेर यो क्षेत्रलाई बनाएका हुन् ।’
उनले अगाडि भनिन्–‘ ड्रग्स जस्ता मुद्दाको कुराले बलिउडलाई धुमिलो बनाउने कोशिश गरिन्छ, मलाई पीडा हुन्छ । ड्रग्सको सेवन बलिउडमा मात्र हुन्छ र ? यदि कुनै दाग छ भने त्यो धोएर जान्छ । बलिउडको यो दाग पनि एकदिन जान्छ । जया बच्चनले जे कुरा भन्नुभएको छ, म पूर्ण रुपमा त्यसको समर्थन गर्दछु ।